अन्तर्राष्ट्रिय Archives – Page2of 15 – Mukundasen Television
दक्षिण कोरियामा बिरालो पनि कोरोना संक्रमण !!!
माघ,१४ दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक एक बिरालोमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यहाँको ख्याङ्सान जिन्जुस्थित एक बस्तीमा रहेको एक घरपालुवा बिरालोमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो । दक्षिण कोरियामा मानिसबाहेक जनावरमा कोरोना संक्रमण भेटिएको यो पहिलो घटना हो । पछिल्लो समय उक्त बस्तीमा कोरोना महामारी फैलिएको थियो । उक्त स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गर्दा बिरालोमा समेत संक्रमण पाइएको हो । उक्त बिरालो पाल्ने परिवारका तीन सदस्यमा पनि भाइरस...
नेपाल सँग सम्झौता नगरी कतारमा नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना
माघ १३ कतारी सरकारले नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता भएता पनि सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिंगापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन दिनेगरी सहमति दिएको छ। नेपाल र यी तीन मुलुकबीच यसबारे सम्झौता पनि भएका छन्। तर कतारसँग...
१२ माघ अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाना नजिक १९ मृत व्याक्ति भेटिएका छन् । उक्त क्षेत्र लागु औषध ओसारपसारका लागि प्रयोग हुनेगरेको क्षेत्र भएको र त्यहाँ प्रायः झगडा हुनेगरेको तामाउलिपास राज्यका अभियोजनकर्ताहरूको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले कार्मागो शहर नजिकैको मेक्सिकोको सडकमा मानव अवशेष भएको दुई वटा गाडीहरू भेट्टाएको पुष्टि गरेको हो । पीडितलाई गोली लागेको थियो र त्यसपछि उनीहरूको शरीरलाई जलाएर राखेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रहरीले बताएको छ ।...
भारतको कोरोना बिरुद्ध खोप बनाउने कम्पनीमा आगलागी
९ माघ भारतको महाराष्ट्रमा रहेको सेरम इन्स्टिच्युड अफ इन्डिया कम्पनिमा आगलाग ि भएको छ । करोनाभाइरस विरुद्धको लाखौँ लाख खोप उत्पादन गरिरहेका बेला हिजो ठूलो आगलागी भएको हो । आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएपनि अन्य ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । आगो नियन्त्रणका लागि १० ओटा दमकल परिचालन गरिएको थियो । कम्पनीको उत्पादन गृहको चौथो र पाँचौ तलामा आगलागि भएको जनाइएको छ । आगलागीका कारण उत्पादित खोप भने...
७ माघ सुडानको डार्फर क्षेत्र जातीय विवादका कारण तनावग्रस्त बनेको थियो । तर अहिले उक्त क्षेत्रलाई शान्त पारिएको सुडान सरकारले जनाएको छ । करिब तीन दिन चलेको जातीय हिंसाका कारण कम्तिमा १५५ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ नागरिक विस्थापित बनेका छन् । डार्फरमा दशौं हजार नागरिक विवादपछि त्रासले विस्थापित भएको एक आदिवासी नेता तथा क्षेत्रीय अधिकारी मोहम्मद अबदल्ला अल डुमाले बताउनुभयो ।संयुक्त राष्ट्र संघ र अफ्रिकी संघले पठाएको शान्ति...
माघ ७, बुधबबार देखि भारतबाट कोरोना बिरुद्धको खोप नेपाल ल्याउने कार्य सुरु भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार देखि नेपालसहितका छिमेकी देशहरुलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालसहित भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेश, म्यानमार र सेसेल्समा खोप आपूर्ति शुरु हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत ट्वीटमार्फत बुधबारदेखि नै खोप वितरण सुरु हुने लेखेका छन् । मन्त्रालयले अनुदानमा खोप वितरण गर्ने बताए पनि...
गुजरातमा सुतिरहेका मजदुरमाथि ट्रक गुड्दा १५ जनाको मृत्यु, ७ जना घाईते
माघ ६, भारतको गुजरातमा ट्रक अनियन्त्रित भई गुड्दा सडक किनारमा सुतिरहेका १५ जना मजदुरहरुको मृत्यु भएको छ । गुजरातको सुरत भन्ने स्थानमा भएको उक्त र्दनाक घटनामा अन्य सात जना समेत घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । १३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको सुरतस्थित स्मीमेर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । सुरत पुलिसका अनुसार चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा सोमबार राति यो घटना भएको हो । उखु लोड गरेको ट्याक्टरसँग ठोक्किएर...
कप्तान लियोनेल मेस्सीलाई बार्साको करियरमा पहिलो रातो कार्ड, सुपर कपको उपाधि बिल्बाओलाई!!!
माघ,५ अतिरिक्त समयमा बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै एथ्लेटिक बिल्बाओले स्पेनिस सुपर कप फुटबलको उपाधि जितेको छ । हिजो राति भएको फाइनलमा बार्सिलोनालाई अतिरिक्त समयमा ३–२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै बिल्बाओले उपाधि जितेको हो । निर्धारित समय २–२ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो । अतिरिक्त समयमा इनाकी विलियम्सले गोल गर्दै बिल्बाओलाई जित दिलाए । अतिरिक्त समयमा बार्सिलोना १० खेलाडीमा समेटियो । बार्सिलोनाका खेलाडी लियोनेल मेस्सीले रातो कार्ड पाएका थिए...
५ माघ काबुल । अफगान सर्वोच्च अदालतका दुई महिला न्यायाधीशमाथि राजधानी काबुलमा गोली हानी हत्या गरिएको छ । अफगानमा जारी हिंसा अन्त्य गर्न सरकार र मुख्य विद्रोही तालिबान समूहबीच शान्ति वार्ता भइरहे पनि व्यक्ति हत्याको क्रम बढेको छ । पछिल्ला केही महिनादेखि खासगरी राजधानी काबुलमा उच्च तहका व्यक्ति लक्षित आक्रमणहरु भइरहेका छन् । यी हत्याहरुले राजधानी काबुल सहित देशका प्रमुख शहर बजारमा त्रास फैलाएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा...
माघ ,२ अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न १९ खर्ब अमेरिकी डलरको महत्वाकाँक्षी राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति–निर्वाचित बाइडेनले आगामी बुधबार सपथ लिएसँगै उक्त राहत योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल शुरु गर्नु हुनेछ । बाइडेनले अमेरिकाको छवि सुधार्न “नयाँ अध्याय” प्रारम्भ गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् ।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा अमेरिकी तल्लो सदनले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेसँगै अमेरिकी राजनीतिमा बाइडेनको...